राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको चर्चा : महेन्द्र माटो भन्थे, नेताहरु मनी भन्छन् - NepalKhoj
राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको चर्चा : महेन्द्र माटो भन्थे, नेताहरु मनी भन्छन्
नेपालखोज २०७६ पुष ५ गते १०:३०
म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्, ०४६ सालपछि कुन नेताले यसो भने । पञ्चायत गयो तर पञ्चायतमा जति पनि नैतिकता नेताहरुमा देखिएन । नेताले पैसा पैसा भनेर पद र पैसाका पछि दगुर्दा देश कंगाल बन्यो, नेता धनी भए । देशको छानो बालेर खरानी बेच्ने नेताहरुले गर्दा स्वर्गको टुक्राजस्तो देश नर्क बन्नपुगेको छ ।
२०१७ साल पुस १ गते प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई बर्खास्त गरे, मन्त्रिमण्डललाई जेल हाले । वीपी कोइराला ८ वर्ष थुनिए, ८ वर्ष भारतमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भए । राजनीतिक जीवनमा यो कम दुःख, पीडा र आक्राशपूर्ण कालखण्ड थिएन । मारिने जोखिम उठाएर २०३३ सालमा नेपाल फर्किएका वीपी कोइरालाले २०३७ सालको जनमत संग्रहमा सुधारसहितको पञ्चायतले जितेकोमा बहुदलवादीहरुले देशैभरि आगजनी, आन्दोलन चर्काउँद उनले साथ दिएनन्, जनताको मतको कदर गरे, निर्वाचन परिणामको स्वागत गरेर वक्तव्य नै प्रकाशित गरेका थिए ।
राजाहरुलाई गाली गरेर मात्र के गर्नु ? देश बचाउने र बनाउने बहादुर कोही छन् ?छैन भने यो झन कालो नभए के हो ?
पुस १ गते कालो दिन हो । सेतो उज्याल्यो दिन कुन हो ? राजा महेन्द्रले दुस्साहस नै गरेछन् ।
जका शासकहरु देशका लागि कुन साहस देखाइरहेका छन् । देश बनाउने बिद्रोह, बिद्रोहपछिको कारिगरी, अधिनायकवादबाट स्वतन्त्रता बचाउने साहस कतिजनासँग छ ? भए कालोदिनका विरुद्ध उज्यालो दियो बाल्ने ताकत, अक्किल र जाँगर किन देखिदैन ?
नेपालको इतिहास भनेकै राजाहरुले बनाएको देश हो । देश कसरी जोगिएको थियो, कसकसले जोगायो ? देश प्रेम के हो ? नागरिक एकता कस्तो हुनुपर्छ ? पूर्वधार बिकास र मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्बन्धको महत्व केकस्तो हुनुपर्छ ? यी सवालहरुको जवाफ दिने हो भने विदेशभक्त अनि लेण्डुप चरित्रहरुलाई देशभक्ति, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता मन नपर्नुमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
कांग्रेस नेता सिंहले खोले महाधिवेशन सम्पर्क कार्यालय
‘आधुनिक कृषिको विकास गर्न वित्तीय साक्षरता आवश्यक’
अदालतद्वारा दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश
‘संस्कारको जरा काटेर घाँस भएर बाँच्न त सकिन्छ, तर जीवनमा बर-पिपल भएर झाँगिन सकिँदैन’